म्यानचेस्टर सिटीको जितको अर्थ « AayoMail
म्यानचेस्टर सिटीको जितको अर्थ
2020,14 July, 4:43 am
म्यानचेस्टर सिटीले त्यही उत्तर पायो, जसको आसमा क्लब थियो । फेरि सिटीसामु अरू विकल्प पनि थिएन। क्लबमाथि युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) को दुई वर्षको प्रतिबन्ध थियो, युरोपमा खेल्नबाट।
अब जतिबेला यो निर्णय उल्टिएको छ, सिटीका धेरै समस्या पनि एकप्रकारले समाधान भएका छन्। जस्तो, प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले छोड्ला भन्ने चिन्ता भएन। न त यस्तै चिन्ता, स्टार खेलाडी केभिन डी ब्रुयन र रहिम स्टर्लिङलाई लिएर रह्यो।
खासमा अब कोही पनि स्टार खेलाडीले सिटी छाड्न चाहेन छैन। यस्तोमा तय भएको छ, सिटीले पछिल्लो एक दशकमा जुन प्रकारको फुटबल साम्राज्य तयार पारेको छ त्यो कायम रहनेछ। यो त हो, सबै क्लब र यसका समर्थकले चाहेको पनि।
‘कास’ ले भनेको छ, युरोपेली क्लब फुटबलको सर्वोच्च संस्था यूईएफएले भने जस्तै सिटीले आर्थिक मामिला धेरै ठूलो बदमासी गरेको छैन। नत्र सिटीमाथि आरोप थियो, यसले लागत घटाउने क्रममा केही आर्थिक चलखेल गरेको थियो।
खाली सिटीमाथि एक करोड १० लाख डलर जतिकाे जरिवाना मात्रै तोकेको छ, जसलाई उसले खुसी खुसी तिर्नेछ। तर युईएफए स्वयं भने पूरा मामिलामा हदै कमजोर देखिएको छ। सिटीका केही ई-मेल र कागजात ह्याकरको माध्यमबाट बाहिरिएको थियो।
ती दस्तावेजले बोल्थ्यो, क्लबले केही न केही बदमासी गरेको छ। तर स्वयं क्लबले भने ती दस्तावेजको आधारमा जे जति धारणा खिचिएको थियो, त्यो सबै ठीक होइन, खाली बढी हल्ला मात्र हो भन्न खोज्यो।
सम्भवत: अब यो पूरा घटनाक्रमले थप नाटकीय मोड लिने छैन। तर एउटा तथ्य के निश्चित भएको छ भने युईएफएले एउटा काम गर्नै सकेन। केही क्लबले आफू मनलाग्दो खर्च गर्ने, त्यसको आफूले चाहे जस्तो आर्थिक विवरण राख्नेलाई ठ्याक्कै रोक्ने।
यसको अर्थ अब जसको हातमा पर्याप्त पैसा छ, उसले फुटबलमा जस्तै पनि उपाधि चुम्न सक्छ र यसका लागि उसले पैसाले उपाधि किनेको भन्दा पनि खासै धेरै फरक पर्ने छैन। सिटीको अहिलेसम्मको सफलता एक प्रकारले तेल बेचेर खाडीबाट कमाएको पैसा न हो।
यसको अर्थ युईएफएको आर्थिक आचारसंहिताको अब केही अर्थ रहेन, कम्तीमा तत्कालका लागि। यसलाई छोटकरीमा ‘एफएफपी’ भनिन्छ अर्थात ‘फाइनान्सियल फेयर प्ले’।
यसलाई लागू गर्नमा युईएफए चुकेकै हो। यसलाई वास्तवमै लागू गर्न युईएफए असफल रहेको यो पहिलोपल्ट होइन, यसअघि पनि यस्ता घटना भइसकेका छन्। लगभग यस्तै घटनामा चेल्सी बचिसकेको छ, पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) पनि बचिसकेको छ ।
अनि यस्तै घटनाबाट इन्टर मिलान पनि जोगिएको छ। अब के त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तत्कालका लागि सिटीले मज्जाले युरोपमा खेल्नेछ र उपाधि नै चुम्न सक्ने टिम बनाउन सक्नेछ। त्यसो त अहिलेको टिममा पनि त्यो सामर्थ्य छ। खासमा चिन्ता भनेको अब युईएफएकै हो।
भलै यो पूरा घटनाक्रममा यो संस्था हारेको छ, तर यो चुप लाग्नु हुन्न। अझ यसले आफूलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। आखिरमा पैसाले फुटबलमा सफलता किन्न खोज्ने काम त कसरी राम्रो हो र?
-अनुवादित सामग्री (न्युयोर्क टाइम्सबाट)